Madagasikara: Nandray Baiko avy Hatrany ny Governemantan’i Kolo Roger. | mandimby maharo
Madagasikara: Nandray Baiko avy Hatrany ny Governemantan’i Kolo Roger.
Posted on 19 April 2014 19 April 2014 by Mandimby Maharo
Ny 18 Aprily 2014 no natolotra ireo mpikambana ao amin’ny governemata ny Repoblika faha efatr’I Madagasikara. Mpikambana izay nofidian’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina araka ny tolotra nataon’ny Praiminisitra Kolo Roger. Mijoro avokoa izany izao ny rafitra hitondrana an’I Madagasikara ao anatin’ny 5 taona Manaraka. Ireto avy ary ireo mpikambana ao amin’ny governemanta ireo, araka ny didim-panjakana laharana faha 2014 – 235 (Novakiana tamin’ny teny BAIKO) nosoniavin’ny filohan’ny repoblika sy ny praiminisitra.
Ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta. Sary: Fiadidina ny Repoblika ny Madagasikara
Ministre d’Etat chargé des Infrastructures, de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire
Ministre auprès de la Présidence chargé des Ressources Stratégiques
Monsieur LALAHARISAINA Joéli Valérien
Général de division RAKOTOZAFY Dominique Jean Olivier
Madame RAZAFITRIMO Arisoa Lala
Madame RAMANANTENASOA Noëline
Monsieur RAZAFINDRAVONONA Jean
Général de division RAVELOHARISON Herilanto
Ministre de l’Industrie, du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises
Monsieur JULES Etienne Rolland
Monsieur RAVATOMANGA Rolland
Monsieur le Premier Ministre, KOLO CHRISTOPHE Laurent Roger
Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
Monsieur HORACE Gatien
Monsieur RATSIRAKA Iarovana Roland
Contrôleur Général de Police RANDIMBISOA Blaise Richard
Monsieur RAMPARANY Anthelme
Monsieur FIENENA Richard
Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche
Ministre de l’Elevage et de la Protection Animale
Monsieur RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
Ministre du Transport et de la Météorologie
Monsieur ANDRIANTIANA Jacques Ulrich
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales
Madame JOHASY Raharisoa Eléonore
Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies
Ministre de la Communication, de l’Information et des Relations avec les Institutions
Monsieur REBOZA Mahaforona Cyrille
Ministre de l’Artisanat, de la Culture et des Patrimoines
Madame RANDRIANARISOA Vaonalaroy
Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie
Général de division PAZA Didier Gérard
Nisy avy hatrany ny filan-kevitry ny minisitra taorian’io fanendrena io ka toy izao no vonto atiny.
Conseil des Ministres – Vendredi 18 avril 2014
Ny mpandinika politika dia samy milaza fa governemanta ny fanampenam-bava ireo atahorana hitabataba ity najoro ity. Vitsy ireo tena teknisiana amin’ny toerana ametrahana azy ary tsapa koa ny kitranoantrano ao amin’izao firafitra izao.
Izaho manokana dia mametraka fanontaniana ny amin’ny tsy namakiana, na fara fahakeliny ny nandikana ity didy ity tamin’ny teny Malagasy. Ny fanazavana moa dia hoe mba afahan’ireo vahiny mahazo ny hevidehibeny no antony namakiana azy ampahibemaso tamin’ny teny vazaha. Midika ve izany fa tsy natao hahazo ny toe-draharaha eto Madagasikara ny vahoaka Malagasy?
Tags: governemanta, Hery Rajaonarimampianina, KOLO ROGER, MadagasikaraCategories: Actralité, politique